काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को १० महिनाको अवधिमा नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३०.५ प्रतिशतले बढेको छ । व्यापार
एजेन्सी । युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणका कारण देखाउँदै विश्व बैंकले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको वृद्धि अनुमान २.९ प्रतिशतमा घटाएको छ, जुन जनवरीको प्रक्षेपणभन्दा १.२ प्रतिशतले कम छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रले ८० वर्षभन्दा
काठमाडौँ । तपाईंले एक वर्षमा के कति कर तिर्नुपर्ला ? हिसाब गर्नुभएको छ । यदि छैन भने तपाईँलाई हामीले जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ । सरकारले यही जेठ १५ गते
हरेक नेपालीको टाउकामा ६३ हजार ३१० रुपैयाँ ऋण
काठमाडौँ । तपाईको टाउकामा ऋणको भार कति छ ? उत्तर पनि तपाईसँगै छ । व्यक्तिगत कारोबारका लागि लिइएको ऋणको हिसाब व्यक्तिगतरुपमा नै हुन्छ । त्यसको जिम्मेवार पनि तपाई नै हो
फिदिम । लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत अघि बढिरहेको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भनिएको काबेली–ए जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) संशोधनका लागि छलफल सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत्
फिदिम, ५ भदौ महालेखा परीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले पाँचथरमा आठ वटा स्थानीय तहमा रु. १८ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को स्थानीय तह कारोबारको प्रतिवेदनअनुसार पाँचथरका
फिदिम । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रु चार अर्ब ११ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १२६ प्रतिशत बढी प्रगति हासिल गरेको
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा पाँचथरका कुन स्थानीय तहले कति बजेट पाए ?
फिदिम, १७ जेठ । संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहहरुलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट वृद्धि गरी पठाएको छ । जसअनुसार पाँचथरका आठ वटै स्थानीय तहहरुलाई संघीय सरकारले बजेटमा
बीबीसी । साउन १ गतेदेखि लागु हुने कूल साढे १६ खर्ब रुपैयाँको अध्यादेश बजेट प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारबाटै सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको